Zinnat (ဇင်းနတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Zinnat (ဇင်းနတ်)
Zinnat (ဇင်းနတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Zinnat (ဇင်းနတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Zinnat (ဇင်းနတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
လည်ချောင်း၊ လေအိတ်၊ နားအလယ်ပိုင်း၊ အဆုတ်သို့ ရင်ဘတ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အရေပြားနဲ့ တစ်ရှူးတွေ ဘတ်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့ လိုင်းမ်ရောဂါတွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Zinnat (ဇင်းနတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးပညာရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ မသေချာဘူးဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးဝါးပညာရှင်တို့ကို မေးနိုင်ပါတယ်။
Zinnat (ဇင်းနတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Zinnat (ဇင်းနတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Zinnat ® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
၃လအောက်ကလေးတွေအတွက် မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒီဆေးကိုအသုံးပြုစဉ်မှာ ဓာတ်မတည့်မှုတွေ၊ မှိုစွဲခြင်း၊ အပြင်းအထန်ဝမ်းလျှော့ခြင်းတွေ စတဲ့လက္ခဏာတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောလက္ခဏာတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးစစ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင် ဒီဆေးကသွေးတွင်းသကြားဓာတ်အတိုင်းအတာကို သက်ရောက်မှုရှိန်ိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Zinnat (ဇင်းနတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Zinnat (ဇင်းနတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ယားနာအဖုအပ်ိမ့်၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ ပါးစပ်မျက်နှာစတာတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Zinnat (ဇင်းနတ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Zinnat (ဇင်းနတ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Zinnat (ဇင်းနတ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Zinnat (ဇင်းနတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကူးစက်ပိုးပြင်းထန်မှုနဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး 250 mg to 500 mgတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Zinnat (ဇင်းနတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကူးစက်ပိုးပြင်းထန်မှုနဲ့ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး 10 mg/kg (toamaximum of 125 mg) ကနေ 15
mg/kg (toamaximum of 250 mg)အထိပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် စိတ်မချရမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်မှာ စိတ်ချရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်ဝဝနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိလိုတာတွေကို သင့်ဆရာဝန်တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Zinnat (ဇင်းနတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောကျတိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇနျနဝါရီ 10, 2018